ပန်ဒိုရာ: မိုးရေစက်တွေနဲ့အတူ Happy Birthday Nyimalay!
မပန်က ဒီလိုတော့လည်း နုနုဖြော့ဖြော့ ရေးတတ်သား…ဟီးဟီး။ ကျွန်မ tag လုပ်ခံရတော့ မပန်လိုရေး ရမှာလား။ ဒါဆိုရင်တော့ စဉ်းစားရဦးမယ်။
ပန်ဒိုရာကြီးဗျာ.. ဒီလောက်ရက်စက်မယ်လို့ အထင်ခဲ့ဝူ..
၈နှစ်သမီးကတည်းက ညီမလေးနဲ့ ခွဲ ခဲ့တာတဲ့..
June 17, 2007 at 2:00 AM
အကို၂ယောက်နဲ့ ဒီလောက်ချစ်တဲ့ အမ ရှိတဲ့.. ကံကောင်းလှတဲ့ မပန်ညီမလေးတွက်.. ဒီကနေပဲ မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်း ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင် ။
A good Birthday present to your sister. Tomorrow is my birthday of 33. But my parents told me there was no rain while I was born. Whatsoever it is, this birthday present is great and meaningful to read.
ညီမလေးရေ ပျော်ရွှင်ဖွယ် မွှေးနေ့ဖြစ်ပါစေ.. ကဲကြည့် အမကြီးပန်က နုတ်ခန်းရွဲ့ မျက်မှောင်ကျူတ်ပြီး မျက်စောင်းက ထိုးပြန်ပြီ- ရိုးရိုးသားသား ဆုတောင်းပေးတဲ့ဟာကို- ဟွန်း-
(ဟိ မသိမသာ အမလို့ ခေါ်လိုက်ရတာ အရတာ ချိတာ :P )
ညီမလေး မွေးနေ့မှာ ဆုတောင်းသူများ မှတ်ချက်ရေးသွားသူများကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါကြောင်း..
အမလို့ မရိုးသားသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ခေါ်ပါက ကျေးဇူးမတင်ပါကြောင်း။
ပျော်ရွှင်ဖွယ် မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ ညီမလေးရေ။ ကျေးဇူးမတင်ချင်လည်းနေ၊ ကျေးဇူးအတင်ခံချင်လို့ လာဆုတောင်းပေးတာမှ မဟုတ်ပဲ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အမပဲ။
ကိုဖြိုး.. ဟုတ်တယ် မိုးတွေကတော့ ရွာနေတုန်းပဲလေ.. ဟဲ..
ပေါက်ပေါက်ဆုပ်.. ကန်စွန်းရွက် မပါဘူးလား.. ဟဲဟဲ.. ကိုယ်ကလည်း ညီမလေးရတာ ကံကောင်းပါတယ်
ဇင်ကိုလတ်.. အင်းး..ကျေးဇူးတင်ခံချင်လို့ မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ ကျေးဇူးတင်လိုက်ပါပြီ.. လက်ဆောင်လေးပါရင်တော့ ပိုကောင်းမယ်ဟာ..
အော်..တိုက်ဆိုင်လိုက်တာနော်..တနင်္ဂနွေ ဆံပင်ဖြောင့် အသားဖြူ ပိန်ပြားပြား စိတ်ကောက်တာဒင်မကပဲ.. မပန်ညီမက ဇွန်၁၇..အပ်မိန်ညီမက မေ၂၁..မေထုန်ရာသီဖွားချင်းလဲ လာတူနေဒယ်.. မပန်ရဲ့ ညီမလေးပေါ်ထားတဲ့ ခံစားချက်နဲ့ ထူးထူးခြားခြား လာတူနေလို့ ဖတ်ရင်း မျက်ရည်တောင်ဝဲတွားဒယ်..မပန်ရယ်..